Igumbi kwiFusine Lakes-Friland
UFriland uthatha ukuba ufumane amachibi e-Fusine kwindawo enqabileyo: ungalala elunxwemeni lwechibi kwaye uvuke entliziyweni yale ntlambo intle. Uya kukwazi ukuyithanda imbonakalo yomhlaba eguqukayo, amagqabi atshatyalaliswe yikwindla, uhambahamba phakathi kwamachibi, unukise ivumba lehlathi kwaye ungcamle izitya eziqhelekileyo ezisuka kwindawo yokutyela ekufuphi.
Ukuba ujonge impelaveki yokuzola kunye nokunxibelelana kwakhona nendalo, kule paradesi uya kuyifumana le nto uyifunayo.
Indawo iyafumaneka de kube nge-8 kaDisemba
I-Friland lithuba lokuthatha ikhefu kubomi bemihla ngemihla kwaye uchithe ixesha elithile unxibelelana ngokusondeleyo nendalo, kwiindawo ezintle.
IFriland yindlu encinci ephathwayo kwaye iyazenzela (ngaphandle kwegridi). Inazo zonke iinkonzo eziqhelekileyo zekhaya. Kwi-sqm ye-12 uya kufumana: ibhedi ephindwe kabini, ikhitshi, ishawa kunye nendlu yangasese (engeyikhemikhali), ukufudumeza kunye ne-air conditioning. Indawo engqongileyo ibonakaliswe ngendawo ebalulekileyo kodwa eyamkelekileyo, enika ubuhlobo kunye nokuphila kakuhle. Iifestile ezinkulu zembonakalo yendawo yokuhlala zikunika ithuba lokuzintywilisela ngokupheleleyo kumhlaba.
Uya kufumana ukukwamkela:
- iilitha ezi-2 zamanzi okusela
- isepha yezinto eziphilayo kunye neshampu
Ukuzimela kwenzelwe ukubonga kwi-system advanced recycling yamanzi kunye nokusetyenziswa kweepaneli ze-photovoltaic.
Igumbi liyacocwa kwaye licocwe phambi kokuhlala ngakunye.
Siya kuhlala sifumaneka ukude kwincoko ye-airbnb okanye ngokufowunela inombolo yenkampani